I-Cementir Holding yonyusa intengiso kunye nemivuzo ukuza kuthi ga ngoku ngo-2021
ngu admin on 21-11-13
I-Italiya: Ngexesha leenyanga ezilithoba zokuqala ze-2021, i-Cementir Holding irekhoda intengiso edibeneyo ye-Euro1.01bn, inyuke nge-12% ngonyaka ukusuka kwi-Euro897m kwixesha elihambelanayo le-2020. Ingeniso yayo phambi kwenzala, irhafu, ukuhla kwexabiso kunye nokunciphisa imali (EBITDA) ) inyuke nge-21% ukuya kwi-Euro215m ukusuka kwi-Euro178m. ...
Inyathelo leeTagethi eziSekwe kwiSayensi liqinisekisa iinjongo zokunciphisa i-CO2 ye-Ambuja Cement
I-Indiya: I-Ambuja Cement ifumene ukuqinisekiswa kwi-Science-Based Targets Initiative (SBTi) ukuba iithagethi zayo zokunciphisa i-CO2 zihambelana nemeko engaphantsi kwe-zero yokufudumala kwehlabathi. I-India Infoline News inike ingxelo yokuba i-Ambuja Cement izinikele kwi-Scope 1 kunye ne-Scope 2 yokunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 ye-2 ...
I-Portland Cement Association ipapasha imephu yendlela yokungathathi hlangothi kwekhabhoni ngo-2050
I-US: I-Portland Cement Association (PCA) ipapashe imephu yendlela yokungathathi hlangothi kwekhabhoni kumacandelo e-samente kunye nekhonkrithi ngo-2050. Ithi uxwebhu lwesicwangciso lubonisa indlela i-samente yase-US kunye neshishini lekhonkrithi, kunye nekhonkco layo lonke lexabiso, linokujongana nemozulu. tshintsha, yehlisa igrey...
Uqikelelo lwemveliso yesamente yaseIndiya iya kufikelela kwi-332Mt ngo-2022
I-Indiya: I-arhente yokukala i-ICRA iqikelele ukuba imveliso yesamente yaseIndiya iza kunyuka nge-12% unyaka nonyaka ukuya kwi-332Mt ngo-2022. qhuba ukunyuka. I-ICRA iqikelele ukuba imfuno iya kunyuka ngoboya ...
I-Holcim yaseRashiya ibona i-15% yokunciphisa ukukhutshwa ngo-2030 kunye nemveliso yesamente ye-carbon neutral ngo-2050.
ERashiya:IHolcim Russia izibophelele ekufezekiseni ukuncipha kokukhutshwa kweCO2 nge-15% kwimveliso yayo yesamente phakathi kowama-2019 nowama-2030 ukuya kuma-475kg/t ukusuka kwi-561kg/t. Iceba ukucutha ngakumbi ukukhutshwa kwe-CO2 yesamente ukuya kwi-453kg/t ngo-2050, kunye nokuphumeza amanye amanyathelo okuqinisekisa ukungathathi hlangothi kwayo kwe-carbon carbon ...
Intengiso yesamente yekota yokuqala yasePakistan yehle ngonyaka-mali wama-2022
I-Pakistan: I-All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) irekhode ukwehla kwe-5.7% yonyaka-ngonyaka kwintengiso yesamente iyonke kwikota yokuqala yonyaka-mali ka-2022 ukuya kwi-12.8Mt ukusuka kwi-13.6Mt kwixesha elihambelanayo lonyaka-mali ka-2021. Uqiniswa umsebenzi wolwakhiwo lwasekhaya oluquka...
ICemex España ukufumana inkwali kunye nezityalo ezintathu ezilungele ukuxuba zekhonkrithi ezivela eHanson Spain
ESpain: IHanson yaseSpain ivumile ukuthengisa inkwali yayo yaseMadrid kunye nezityalo ezintathu ezisele zilungele ukuxuba kwiBalearics ukuya eCemex España. Umthengi uthe utyalo-mali luthembisa imbuyekezo ephezulu kwaye luyinxalenye yokomelezwa kwesicwangciso-qhinga sehlabathi seendawo ezidityanisiweyo ezithe nkqo kufutshane nokukhula okuphezulu kwedolophu...